Cunto Karin.. qaabka loo kariyo doolshe macaan | www.SomaliAction.tk
Cunto Karin.. qaabka loo kariyo doolshe macaan
Baro qaabka loo kariyo doolshe macaan
si easy ah u raac tilaabooyinkaan soo socda kadibna doolshaha meeshaan saaran oo kale gacantaada ku sameey !!! it is easy steps
Ingredients/waxa laga sameynaayo
1/2 koob buuro la jilciyay
1 1/2 Sokorta Cad
1 Koob Caano Dhanaan
1 Qaado yar oo Faniila ah
2 Koob Burka aan kaceenin
1 Qaado Yar oo qamiiriso
1/4 Qaado Yar Milix (Cusbo)
1 Koob Muus la burburiyay
Directions/Habka loo sameenaayo
Marka hore foornada kululeyso oo ku kululee 350 degrees. Waxaad saliid marisaa weel bir ah ama dhalo 10×15 inch.
Baaquli weyn gudihiisa waxaad ku jilcisaa buurada iyo sokorta ilaa ay ka noqdaan kareemo. Ukunta Hal Hal uugu qaraac sokorta iyo buurada, ka dib ku walaaq ceenaha ciirta (dhanaan) iyo faniilaha. Burka iyo kicisada (qamiirisada) ku walaaq, ilaa ay wax walba isku darsamaan. Ugu danbeestii ku dar oo ku walaaq muuskii aad burburisay oo si fiican uugu walaaq. Ka dibna ku shub oo ku fidi weelkii aad saliida marisay. Marka foornada geli.
Waxaad dubtaa 20 ilaa 25 daqiiqo foornadii aad horay u kululeesatay, ilaa marka aad qori yar (Istakiin) aad ku muddo uu si nadiif ah uuga soo baxo bartamaha doolshada. Marka ay doolshada qaboowdo dusha ka mari cheese spreadka (Kareemada farmaajada).
Middi ku jarjar oo sida sawirka u jar jar.
← Website Somali ah oo loogu talo galay guurdoonka
MUXAMMAD HALOO DIRO AQALKA US CONGRESS →
4 thoughts on “Cunto Karin.. qaabka loo kariyo doolshe macaan”
Fani Xasan Jmac says:
June 23, 2010 at 07:12
ila so xiriirta managaba daysaan
June 23, 2010 at 07:17
Cilmi Boodhari iyo Hodon Maxaad ka ogtahay jacaylkoodii?
Indho deeraleeyey! “
Gabadhu waxay ku tiri Cilmi „Subaax wanaagsan! “ Isagoo markii horeba ka helay qaab-dhismeedka qurxoon ee uu Eebbe u uumay baa haddana wuxuu ku murqaamay midabkeeda oo aad dahabi moodeysey iyo indheheeda debecsan ee ka soo jeeda wejiga dhalaalaya wuxuu ugu jawaabay „wanaagsan“. Islamarkaasna wuu caashaqay
Caashaqii buu u bukay Cilmi Boodhari. „Culays wuu i saaran yahay“buu ku yidhi saaxiibbadiis. Markuu muddo bil ah jacaylka dhex dabaalanayay waxaa soo batay xanuun ka dhashay rabitaan xad-dhaaf ah oo uu u qabay Hodan. Cuntadii iyo hurdadiina way ku yaraadeen. Intii uu Hodan u tegey ayaa wuxuu u sheegay in uu jecel yahay inuu guursado. Hodanna iyadoo girifsan, si kulul bay ugu sheegtay Cilmi inaysan guurkiisa u baahnayn. Muddo kaddib Cilmi wuxuu tiriyey gabaygii ugu horreeyey, isagoo ku muujiyey dhibaatadii la soo deristay
Kaddib markii la wada ciyaarey oo la wada heesey ayay Cilmi suurtoggal u noqotay inuu gooni ula sheekeysto Hodan. Wuxuu u sheegey inuu danaynayo inay noqdaan laba qof oo haasawe wadaag ah, maadaama uu iyada aad dooneyo, hablaha oodhanna uu ka calmaday. Hodan waxay ugu jawaabtay in ay la nooshahay islaan eeddadeed ah oo aan marnaba ka aqbalayn nin iyo sheekadiis toona. Islamarkaasna waxay dhegaha Cilmi si dadban ugu riddey inay jeceshahay in mustaqbalka guurkeedu uu talo ahaan qoyskooda ka go‘o
Dhowr oday oo ay Cilmi is xigeen ayaa macsuumay odayaal dhinaca Hodan ah. Hase yeeshee markii dantii ay iska lahaayeen iska wareysteen arrinkii hanaqaad ma noqon, maxaa yeelay odaydii gabadha la weyddiistay yarad ka kooban xoolo aan xerada Cilmi iyo xerada xigaalkii ku jirin bay ku xidheen. Dhowr bilood kaddib bay hablo reer Berbera ah oo aad uga xumaaday xaaladda Cilmi waxay u soo jeediyeen inuu tan ugu qurux badan ka doorto oo iska illaawo Hodan. Cilmina wuxuu hablihii u tiriyey gabaygan:
Maalin maalmaha ka mid ahayd ayay rag ka mid ahaa Cilmi qoyskiisii go‘aan ku gaareen in Cilmi laga qaado Berbera ee uu ku xanuunsaday, lana geeyo magaalada Burco si uu waabayda jacalka uga soo dawoobo.Cilmi inkastoo ka cudurdaartay safarka, haddana waa uu yeelay. Burco Cilmi waxaa ku soo dhowweeyey dhallinyaro maqashiisnayd inuu dibindaabyo caasahaq oo dareenkiisa ku baahday in muddo ah dhinaca dhulka ugu hayey. Muddo kaddib Cilmi wuxuu bilaabay inuu sheekaysto oo kaftamo. Laakiin mararka uu Hodan soo xasuusto ayuu tash qabsan jirey.
Intii uu Cilmi Saylac joogay dadyow ay qaraabo ahaayeen waxay kula taliyeen inuu ka hadho jacaylkii u socon waayay, waxayna u ballan qaadeen in ay u guuriyaan gabadh allaale gabadhii kale ee uu ka doorto hablaha sokeeye iyo shisheeyaba, meeshay doonto ha joogte. Laakiin Cilmi wuxuu sheegey inuusan Hodan ka maarmi karin, gabadh kalena uusan doonayn
Muddo yar kaddib Cilmi Boodhari guurtidii waxay u dooneen gabadh carab ahayd oo la odhan jirey Faakhir. Arooskii Cilmi waa la qalqalay, guri baa la dadbay oo la qurxiyey, xoolaa loo gawracay, dhallinyaraa u cayaartay. Carab oo cadceedda u ekayd oo qiimaheeda iyo qaayaheeda la yaabay baa aqal loogu dalaq siiyey. Hase yeeshee Cilmi kama uu reysan cudurkii hayay. Hodan mooyee hadal kale waa laga waayay. Damaciisu gabadhii oorida u noqotay waa uu dhaafay. Taasina waxay keentay in Faakhir laga furay. Wixii intaa ka dambeeyey Cilmi jirradii ayaa kuu sii batay. Hurdadii ayuu gebi’ahaanba ka haajirey, cuntadiina way ka degi weydey, hadalkiiba wuu yaraaday. Maalinba maalinta ka dambeysa wuu ka sii dareyey ilaa uu socodkii gabay.
Mohamed Hassan Xaleef
June 23, 2010 at 07:30
Hadaba ma dhaci karaa jacaylkaaso kale mise dib uma so noqonkaro yase uu kaas oo kale helay?Ama arkay mid kaa ka sii daran ama ka la misa ah waxaan sugayaa jawaab tiina somaliyee wayo lagama hadlaayo dad kale dhalin yaro badani se ma u haysataa been Jacaylkaa waxaan rajanayaa inad jawabta igu so celisaan
Fani Xasan Jmac
waan idi salaamay dhalinyarada